~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: October 2013
အပေါ်က ဓါတ်ပုံကတော့ ဒီ MU2013 ပြိုင်ပွဲအတွက် ကျမကြိုက်တဲ့ မယ်(၇)ယောက်ရဲ့ အလှပုံရယ်၊ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ပုံတွေရယ်ကို ပေါင်းပြီး collage လုပ်ထားတာပါ။ သူတို့(၇)ယောက်အကြောင်းက ရှေ့ က အပိုင်း(၁)နဲ့ (၂)မှာ ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခု... ဒီ အပိုင်း(၃)ကို ဆုရဖို့သေချာတဲ့မယ်သုံးယောက်ရယ်၊ စောင့်ကြည့်ရမဲ့ တခြားမယ်တွေအကြောင်းကိုရေးပြီးဒီ "Road to Miss Universe 2013"ပို့(စ်)ကို အဆုံးသတ်ပါမယ်။ အပိုင်း(၂)မှာတုန်းက ဆုရဖို့သေချာတဲ့မယ်(၃)ယောက်ရယ်၊ hot ဖြစ်နေတဲ့ candidate တွေရယ်အကြောင်း ပြောမယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပေမဲံ ခုတော့ hot candidates အစား စောင့်ကြည့်ရမဲ့ မယ်စာရင်း လို့ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ စာလည်း နည်းနည်း ပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။
ဆုရဖို့ 99% သေချာသောသူများ
ဆုရဖို့သေချာတဲ့မယ်(၃)ယောက်ကတော့ Miss Russia, Miss USAနဲ့ Miss Myanmarတို့ပါ။
1. Miss Russia: ပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့နိုင်ငံကမယ်ဟာ အနည်းဆုံးတော့ top-15 ကိုဝင်တာ ထုံးစံမို့ ရုရှားအလှမယ် Elmira Abdrazakovaဟာ အနည်းဆုံးတော့ top-15ဝင်မှာပါ။ top-10ဝင်ဖို့ကတော့ ခက်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူက ကိုယ်လုံးလေးလှတာကလွဲရင် သူ့အရှေ့က ရုရှားမယ်တွေနဲ့ တခြားစီလိုပါပဲ။ အရပ်လည်းပုပါတယ်။ ရုပ်ငြိမ်ဓါတ်ပုံတွေမှာတော့ကြည့်ကောင်းပေမဲ့ movie clip တွေထဲမှာ မလှပါဘူး။
Olivia Culpo (MU2012), Miss Russia 2012, Miss Russia 2013 and Wenxia Yu(MW2012)
ရုရှားဟာ (၂၀၀၂)ခုနှစ်မှာ Oxana Fedorovaက မယ်စကြာဝဠာဆုကို ယူပေးတာ ရဖုးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Oxanaဟာလည်း resigned/dethronedဖြစ်သွားတော့ officially အရ တစ်ခါမှ MU crown မရဖူးဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့သာ (၂၀၁၃)ခုနှစ်အတွက် မယ်စကြာဝဠာဘွဲ့ကို ရုရှားကရသွားရင် MU2013 ပြိုင်ပွဲဟာ တော်တော်ကို ရုပ်ဆိုးတဲ့ပွဲလို့ပဲ ယူဆရမယ်ထင်ပါတယ်။ အောက်က video clip ကလေးကတော့ (၂၀၀၃)ခုနှစ်ကနေ (၂၀၁၂)ခုနှစ်ကြား ရုရှားအလှမယ်တွေရဲ့ ပြိုင်ပွဲရလဒ်သမိုင်းနဲ့ Miss Universe Russia 2013 မိတ်ဆက်ကလေးပါ။
2. Miss USA: Miss Universe Org ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မူပိုင်မို့ Miss USA ဟာ လှသည်ဖြစ်စေ၊ မလှသည်ဖြစ်စေ... ဘယ်နှစ်မှာမဆို top-15 ကို အသာလေးဝင်ပါတယ်။ USAဟာ Miss Universe Ranking Chart (1952-2012)မှာ နံပါတ်တစ်ပါ။ ခု.. ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်မှာတင်ကို Miss USA.. top-15မဝင်တာ (၂၀၁၀)ခုနှစ် .. တစ်နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် Miss USA, Erin Brady လည်း top-15 ဝင်မှာ (၉ ၉ %)သေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Erin Brady ကတော့ အနည်းဆုံး top-10 ဝင်မှာပါ။ သူက အရည်အချင်း ရှိပါတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ပုံပေါက်ပေမဲ့ စကားပြောတာ ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း ကောင်းကောင်းလုပ်ထားပုံ ရပါတယ်။ ဗိုက်မှာ ကြွက်သားလိုင်းနှစ်လိုင်းဖြစ်တဲ့အထိကို ဆော့ထားတာပါ။ အဲ့လို ရဖို့ဆိုတာ တော်တော် မလွယ်ပါဘူး။
3. Miss Myanmar: နောက်ထပ် (၉ ၉ %)ဆုရဖို့ သေချာတဲ့ အလှမယ်ကတော့ Miss Myanmar မိုးစက်ဝိုင်ပါ။ သူဟာ top-16 (top-15+Internet Vote)ကို Internet vote နဲ့ သေချာပေါက်ဝင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Miss Myanmar Universe 2013 @Moscow
ပြောရရင်တော့ ဒီနှစ် MU2013 ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ကြမဲ့ candidate တွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမယ်တွေထက်စာရင် ပိုပြီး strong ဖြစ်ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘယ်မယ်ကိုကြည့်ကြည့် သူ့ဟာနဲ့သူ အားသာချက်တွေ အများကြီး ရှိကြပါတယ်။
Miss Pureto Rico: ကျမရဲ့ Favorite List ထဲမှာ မပါပေမဲ့ တကယ်ကို strong ဖြစ်ပြီး ... လက်ရှိလည်း လူကြိုက်အရမ်းများပြီး၊ Beauty expertတွေရဲ့ ratingအများကြီးရထားတဲ့ အလှမယ်ကတော့ Pureto Ricoအလှမယ် Monic Prezပါ။ ကျမကတော့ မနှစ်ကအလှမယ် Bodine ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ Bodine ဟာ တကယ်ကို လူ၊ ကိုယ်လုံး၊ မျက်နှာ၊ အရပ်.. ဘာမှပြောစရာမရှိအောင် လှပြီး intelligent လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ... top-15တောင် မဝင်ခဲ့ပါဘူး။ MU2012ပွဲရဲ့ wasted beautyပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Pureto Ricoနိုင်ငံဟာ မယ်စကြာဝဠာဘွဲ့ကို (၅)ခါ ရဖူးပါတယ်။ သရဖူမရတဲ့နှစ်တွေမှာလည်း top-15/top-10/top-5.. တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ဝင်ပါတယ်။ Miss Universeပြိုင်ပွဲမှာ rank-3ပါ။ ဒီနှစ် PR မယ် Monic Prez ဟာ top-5 ကို အသာလေး ဝင်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
Miss Universe PR 2013
Miss Colombia: ကိုလံဘီယာ အလှမယ် Lucia Aldanaဟာလည်း ဒီMU2013ပြိုင်ပွဲမှာ စောင့်ကြည့်ရမဲ့သူစာရင်းမှာ ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ သူက မနှစ်ကမယ်ထက် ပို strong ဖြစ်ပါတယ်။ Latina တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်လုံးအရမ်းလှပြီး လမ်းလျှောက်တာ တော်တော်လှပါတယ်။
Miss Paraguay: ဒီနှစ်ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲမှာ သိသိသာသာ ပေါ်လွင်ပြီးလှတဲ့၊ Big4Grand Slams ရဲ့ Best Body of the yearဆုကိုတောင် ရနိုင်တဲ့ အလှမယ်ကတော့ Paraguayအလှမယ် Guadalupe Gonzalezပါ။ အရမ်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး stand out ဖြစ်ပါတယ်။
Miss Croatia: မယ်စကြာဝဠာတွေရဲ့ Firced Beauty Queen era ကပြီးသွားပါပြီ။ ခုနောက်ပိုင်း sweet & classy era ပြောင်းသွားပြီးလို့ pageant expertတွေက ပြောကြပေမဲ့ ကျမကတော့ Miss Croatia, Melita Fabeciကို စောင့်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ သူဟာ top-15ကို အသာလေး ဝင်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Two Strong Black Beauty Queens: Israel and Dominican Republic
မနှစ်ကတော့semi-finalist ကိုတောင် black beauty တွေ တစ်ယောက်မှ မဝင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မနှစ်ကမယ်စကြာဝဠာပြိုင်ပွဲဟာ တော်တော်လေးကို အဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနှစ်တော့ ဘယ်လို လာမလဲ မသိပါဘူး။ ကျမကတော့ ဒီနှစ်မယ်စကြာဝဠာပြိုင်ပွဲအတွက် Miss Israeal, Yityish Titi Anyawနဲ့ Miss Dominican Republic, Yaritza Reyes တို့ကို စောင့်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ Miss Israealဟာ တကယ်တော့ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသူပါ။ Israel ကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုက်တာပါ။
Miss Universe Dominican Republic 2013
Sweet Beauties: Miss Polandအပြင် sweetဖြစ်တဲ့၊ သတိထားစောင့်ကြည့်ရမဲ့ အလှမယ်တွေကတော့ Czech Republic၊ Switzerland နဲ့ Ukraineက အလှမယ်တွေပါ။ ဒီနှစ်အတွက် Czechနဲ့ Swissက အလှမယ်တွေက sweet ဖြစ်တဲ့အပြင် နှစ်ယောက်လုံး ဆံပင်တိုတိုလေးတွေနဲ့ပါ။ နောက်ပြီး မျက်နှာလေးတွေက တစ်မျိုးလေးနဲ့ ထူးခြားသလိုပါပဲ။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒိုင်တွေက ဖိလစ်ပိုင်အလှမယ်တွေအပြင် ယူကရိန်းအလှမယ်တွေကိုလည်း ကြိုက်တတ်လာကြပါတယ်။
Miss Universe Ukraine 2013
Miss Venezuela: ဒီနှစ် Venezuela အလှမယ် María Gabriela Islerဟာ ကျမကြိုက်တဲ့ပုံ မဟုတ်ပေမဲ့ သူလည်း စောင့်ကြည့်ရမဲ့ အလှမယ်စာရင်းမှာပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ top-15ကို အသာလေး ဝင်မှာပါ။
Irene crowning Maria
Others: တခြား ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့၊ စောင့်ကြည့်ရမဲ့ အလှမယ်တွေကတော့...
Miss India, Manasi Moghe
Miss Canada ( Riza Sentos ဟာ pure fillipino ပါ။)
Miss Kosovo ( ရုရှားဟာ Kosovoကို နိုင်ငံအနေနဲ့ မသတ်မှတ်တာကြောင့် Miss Kosovo, Mirjeta Shalaဟာ MU2013ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ခွင့်မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့အလှမယ် website တွေကတော့ သူ.. ဝင်ပြိုင်မယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ Miss Universe official website မှာတော့ သူမပါပါဘူး။)
Miss South Africa ( Marilyn Ramosဟာ မနှစ်ကSAမယ်လို လူကြိုက်မများပေမဲ့ သူလည်း sweet ဖြစ်ပြီး လှပါတယ်။)
Miss Great Britain ( လူကောင်ထွားပေမဲ့ လူကြိုက်များကြပါတယ်။ သူ့အလှက တစ်မျိုး။ သူများတွေနဲ့ သိပ်မတူဘူး။ ကြည့်လို့တော့ တော်တော် ကောင်းပါတယ်။)
Miss Vietnam (May Troung, fierce Beauty)
L to R, Up to Down: India, Canada, Kosovo, Vietnam, Italy
Marilyn Ramos, Miss SA Universe 2013
Kosovo (Withdraw or Not?)
"Road To Miss Universe 2013" post ends here.
မှတ်ချက်။ ။ ဒီ "Road To Miss Universe"ပို့(စ်)ဟာ မယ်တွေ မပြိုင်ကြခင် ရေးထားတာမို့ သူတို့တွေ တကယ်ပြိုင်ကြတဲ့အခါ (99%)ဆုရတဲ့ မယ်သုံးယောက်ကလွဲရင် ကျန်တာတွေက လူပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ Nov 3: National Costume Showနဲ့ Nov 5: Preliminary Competition ပွဲမှာ မယ်တွေပြိုင်တာကို ကြည့်ပြီးရင် နောက်တစ်ပုဒ် (My Sentimental Top-16) ထပ်ရေးပါဦးမယ်။း)
ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. အပိုင်း(၁)မှာ အချိန်တွက်ပေးထားတာ မှားနေပါတယ်။ ပေါင်းရမဲ့အစား နုတ်ထားပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြင်လိုက်ကြနော်... ဟဲ...ဟဲ... ကိုယ်က အဲ့လိုပဲ အချိန်တွက်ရင် အမြဲတမ်း မှားတတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကိုပြန်တုန်းကလည်း နာရီမှားတွက်ပြောလိုက်တာ .. မိနစ်(၉ ၀)နုတ်ရမဲ့အစား ပေါင်းပေးလိုက်လို့ လေဆိပ်ကို (၃)နာရီကြိုစောရောက်နေပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် taxi နဲ့ ပြန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ ကိုယ့်ကိုကြိုမဲ့သူတွေက ထွက်သွားကြပြီ။ ကိုယ်အိမ်တံခါးခေါက်တော့ အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ အဒေါ်အငယ်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲ ကိုယ့်ကို တအံ့တသြနဲ့ ပြေးကြိုရပါတယ်။ :D
အားလုံးပဲ Haveanice working week ahead ပါ။ Thank you for reading this post. ^^
Regards, witch83 (20/10/2013; 8:01PM; GMT+8)
References: Miss Universe Org, Missosology, Global Beauties, Beauty Pageant Grand Slam, TheIDealBeauty, Google To Continue Reading
Posted by witch83 at 8:01 PM2comments:
Labels: Beauty Pageant, Beauty Show, MU2013
Road To Miss Universe 2013 (Part-2)
Road To Miss Universe 2013 အပိုင်း (၁) ကို ရေးပြီးတဲ့အခါ အပိုင်း(၂)ကို ဆက်ရေးပါရစေ...။ အပိုင်း(၁)မှာတော့ ကျမကြိုက်တဲ့ မယ်(၃)ယောက်အကြောင်း (Miss France, Miss Indonesia နဲ့ Miss Mexico) ရေးခဲ့ပါတယ်။ အပိုင်း (၂)မှာ နောက်ထပ်လေးယောက်အကြောင်း ရေးပါ့မယ်။ ^^
MU2013ပြိုင်ပွဲအတွက် နောက်ထပ် နှစ်သက်မိသူကတော့ ပိုလန်အလှမယ် Paulina Krupińskaပါ။ အရပ် ၅ပေ ၁၀လက်မရှိပြီး မျက်လုံးအနက်ရောင်ရှိတဲ့ အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် ပိုလန်အလှမယ်.. ပေါ်လင်နာဟာ အရင်နှစ်အလှမယ်နဲ့ လုံးဝမတူဘဲ သွက်သွက်လက်လက်ကလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ စိတ်ကောင်းရှိတာလေးလည်း မျက်နှာမှာ ပေါ်ပါတယ်။ sweet လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ပုံစံလည်း ပေါက်ပါတယ်။ ပညာတတ်ပုံလည်း ရပါတယ်။ (နည်းနည်းများ ညွှန်းတာ များသွားသလားမသိဘူး။ ဟဲ..ဟဲ.. တစ်ခါ ပြောဖူးပါတယ်... I am in love with Polish Beauty လို့ .. :P)
သူမကိုယ်သူမကတော့ ... သူမဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ အကောင်းမြင်ဝါဒီတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လူတွေကို ကူညီရတာ နှစ်သက်သူတစ်ဦးလို့ ဆိုပါတယ်။
Miss Universe Poland 2013 (Center)
Miss Poland Final Q&A မှာ homo realationship ကို ထောက်ခံပါသလားလို့ မေးတော့ မမချောက yes တဲ့။ ပိုလန်မှာမို့သာပဲ။ မြန်မာပြည်မှာဆို အဆဲခံရမယ်။ :D အောက်က movie clip ကလေးက သူ့ movie testလေးပါ။ သူ့ရဲ့ တခြား movie clip တွေကို shareချင်ပေမဲ့ youtube bloggerမှာ ပြန်ရှာရင် ရှာမရပါဘူး။ ရှိတာပဲ share လိုက်ပါတယ်။ ( ဒါနဲ့ စကားမစပ်... တစ်ခုမေးပါရစေ။ တစ်ချို့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေက youtube မှာ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရင် ရပေမဲ့.. ဘလော့ပေါ်ကနေရှာလို့ မရပါဘူး။ အဲ့ဒါ သူများတွေ ရော ဖြစ်လားသိချင်ပါတယ်။ )
Paulinaဟာ အနည်းဆုံးတော့ top-15ကို အသာလေးဝင်မယ် ထင်မိပါတယ်။ sweet and classy ဖြစ်တာကြောင့်လည်း top-10နဲ့ top-5 ကိုလည်း တက်ကောင်းတက်နိုင်ပါတယ်။ ဝင်လည်း ဝင်စေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့... သူ့ကိုတော့ သူ.. ပိုလန်အလှမယ်ဖြစ်ခါစကပုံကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ ခုလက်ရှိပုံကြီးက ရင့်သွားသလိုပဲ။ sweet တော့ ဖြစ်နေသေးပေမဲ့ အရင်လို သွက်ပြီး ကြည့်မကောင်းတော့ဘူး။
ဒီပုံက MU2013ပြိုင်ပွဲအတွက် တင်ထားတဲ့ပုံပါ။
စကားချပ်။ ။ မနှစ်က ပိုလန်အလှမယ် Marcelina Zawadzkaကိုလည်း အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ Marcelina ကတော့ အသက်(၂၃)နှစ်ပဲရှိပေမဲ့ အရမ်း ရင့်ကျက်ပြီး ဖော်ရွေပါတယ်။ လှလည်းလှ ဆွဲဆောင်မှုလည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ သူမဟာ ဆုမရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ပိုလန်ရဲ့ drought ကို top-15ဆုနဲ့ ရေပြန်လောင်းပေးခဲ့တဲ့သူပါ။
Miss Poland Universe 2012, Marcelina Zawadzka
Paulinaပြီးရင် အော်ဆီအလှမယ် Olivia Wellsကို ကြိုက်ပါတယ်။ အရပ် (၅)ပေ (၉ )လက်မခွဲရှိပြီး ဆံပင်အညိုရောင်၊ မျက်လုံးအညိုရောင်ပိုင်ရှင်၊ အသက် (၁၈)နှစ်အရွယ် Olivia ဟာ အရင်နှစ် အော်ဆီမယ်တွေနဲ့ မတူဘဲ ပုံစံတစ်မျိုးထွက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး နည်းနည်းလေးလည်း အရင်နှစ်မယ်တွေထက် ပိုထွားပါတယ်။ ဒီလို အော်ဆီမယ်စကြာဝဠာဆုကို ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ကရတာ ဒါ.. ပထမဦးဆုံးပါ။ သူမဟာ အလယ်တန်းကျောင်းနဲ့ အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ ထုးချွန်ပြီး ထက်မြက်ခဲ့သူတစ်ဦးလို့ သိရပါတယ်။ အခုလက်ရှိတော့ ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးပါ။
Olivia Wells, Miss Universe Australia 2013
အောက်က ဓါတ်ပုံကတော့ Olivia အတွက် national costumeအတွပ် ပြည်သူတွေကို မဲစနစ်နဲ့ရွေးခိုင်းထားတဲ့ ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ ဝတ်စုံ(၄)စုံပါ။ အပြာလေးကို မဲအများဆုံးနဲ့ ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့ဒီအပြာလေးကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုထဲမှာလည်း အဲ့ဒီအပြာလေးက သူနဲ့အလိုက်ဆုံးလိုပါပဲ။ သူ့နိုင်ငံရဲ့ တကယ့် ရိုးရာဝတ်စုံဟုတ်မဟုတ်တော့ သေချာမသိပါဘူး။ :)
(၂၀၁၃)ခုနှစ် မယ်စကြာဝဠာပြိုင်ပွဲအတွက် ကျမကြိုက်တဲ့ အလှမယ်တွေထဲက နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဘိုလီဗီးယားအလှမယ် Alexia Viruez ပါ။ သူ့ကိုတော့ ဟိုးအစောကြီးကတည်းက တွေ့တာပါ... ဟော့လွန်းလို့ ကြိုက်တာပါ။ ကိုယ်လုံးလည်းလှ မျက်နှာလေးကလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး လှပါတယ်။ အရပ် (၅)ပေ (၁၀)လက်မခွဲ ရှိပါတယ်။ သူလည်း အသက် (၁၈)နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သူ့နိုင်ငံတွင်းကပြိုင်ပွဲတွေမှာ best smile, miss eleganceနဲ့ miss photogenic ဆုတွေကို ရခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမရဲ့ ဖိနပ်စင်မှာ high heelsနဲ့ tenis shoesတွေကလွဲရင် တခြားဘာဖိနပ်မှ မရှိဘူးလို့လည်း သူမက ပြောဖူးပါတယ်။
Hot, Attractive & Sexy Miss Bolivia for MU2013
Official Photo for MU2013
Miss Boliviaပြီးရင်တော့ Philippines အလှမယ် Ariella Arida ကို ကြိုက်ပါတယ်။ သုမဟာ မနှစ်ကအလှမယ် MU2008 1RU, Janine ထက်ပိုလှပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် ထင်ပါတယ်။
"One lesson in life that we, women, can teach men is being sensitive. Because we all know that men are more logical when it comes to decision. They usually are more rational, straight forward. Unlike we, women, we use our heart and we tend to get emotional in some of our decisions. For me, sensitivity is something that we can teach men."
ဆိုပြီး နောက်ဆုံး Q&A session မှာ ဖြေသွားတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိပါဘူး။ အဲ့ဒီအဖြေကို အရမ်း ကြိုက်ပါတယ်။ (၂၀၀၈)ခုနှစ်က MU2008နဲ winner Diana Mendoza နဲ့ (၂၀၀၉ )ခုနှစ်က MU2009 winner, Stefania Fernandeတို့လည်း ဒီလို similar question တွေကို တကယ့် Miss Universe Final Q&A sessionတွေမှာ ဖြေဖူးကြပါတယ်။ အဖြေတွေတော့ မတူကြဘူးပေါ့။
ဖဦးထုပ်ပရိသတ်တွေကို မကြိုက်ပေမဲ့ သူတို့နိုင်ငံတွေက အလှမယ်တွေက လှပြီး အရည်အချင်း ရှိကြပါတယ်။ သို့ပေသိ... Miss Supranational 2013ပြိုင်ပွဲနဲ့ Miss World 2013ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဖိလစ်ပိုင်အလှမယ်တွေ သရဖူဆောင်းထားကြပြီမို့ ကျမကတော့ ဖိလစ်ပိုင်အလှမယ်တွေကြီး ဆုရတာမကြိုက်လို့ Arida ကိုကြိုက်ပေမဲ့ ... သူ့ကိုတော့ MU2013 winner မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။(တော်တော် တရားတာပဲနော် :P ) Aridaကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအပေါ်မှာ နည်းနည်းတော့ pressure ရှိမယ်ထင်တယ်။ Aja Aja, Arida!
Miss Universe Phillipines 2013, Ariella Arida
Ariella Aridaပြီးရင်တော့ ကျမ သဘောကျတဲ့ အလှမယ် list ဒီမှာ ပြီးပါပြီ။ နောက်တစ်ပိုင်းကျရင် ဆုရဖို့ (၉ ၉ %)သေချာတဲ့ မယ်သုံးယောက်ရယ်၊ နောက်ပြီး ခုလက်ရှိ လူကြိုက်များတဲ့ အလှမယ်တစ်ချို့အကြောင်းရယ်ကို ပြောပြီးရင် ဒီ Road To Miss Universe 2013 ပို့(စ်)ကို အဆုံးသတ်ပါမယ်။ တကယ်တော့ အပိုင်း(၃)က ရေးပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ နောက်.. ရက်နည်းနည်းကြာမှ တင်ပါ့မယ်။
စာလာဖတ်ကြတဲ့သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။း)
Regards, witch83 (15th Oct 2013, 5:11PM; GMT+8)
4. Global Beauties
Posted by witch83 at 5:11 PM 1 comment:
Labels: Beauty Pageant, Beauty Show, MU2013, သတင်း, နှစ်သက်မိသော အလှမယ်များ
Road To Miss Universe 2013 (Part-1)
ဒီပို့(စ်)ကို မရေးခင် နည်းနည်းလောက် စကားပြောပါရစေ။ တကယ်တော့ ရေးချင်တာ Miss Universe 2013 ပြိုင်ပွဲအတွက် ကျမ သဘောကျတဲ့ မယ်တွေအကြောင်းကို ရေးချင်တာပါ။ Miss USA ပြိုင်ပွဲ result ကိုစောင့်ရင်း ဇွန်လထဲမှာ အလုပ်မှာဗီဇာတိုးတာက အဆင်မပြေလို့ အလုပ်မထွက်ခင် ဇူလိုင်လအထိ အလုပ်တွေအပြီးသတ်နေတာနဲ့ မရေးဖြစ်ပါဘူး။ နောက်တော့ အလုပ်ရှာတာရယ်.. စိတ်ရှုပ်နေတာတွေရယ်ကြောင့် မရေးဖြစ်ရာကနေ ကြာလာတော့ ဒီပို့(စ်)ကိုရေးဖို့ စိတ်မပါတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မရေးတော့ဘူး စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပွဲက တကယ် နီးလာတော့ ပိုးကပြန်ထလာပါတယ်။ တို့ထိ၊ တို့ထိ ပြန်ရေးနေရာကနေ မနေ့ညက ညီမတစ်ယောက်နဲ့ ဒီပွဲအကြောင်း ထိုင်ပြောနေရင်းက ဒီ MU2013 post ကို အပိုင်းခွဲပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတယ်။ ဒီပွဲသတင်းတွေနဲ့ ကျမကြိုက်တဲ့ အလှမယ်တွေနဲ့ တခြား strongဖြစ်တဲ့မယ်တွေအကြောင်းကို အပိုင်းလိုက်ခွဲပြီး ရေးပါ့မယ်။း)
News For MU2013
Miss Universe 2013 Final ပြိုင်ပွဲကို (၂၀၁၃)ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၉ )ရက်နေ့.. ရုရှားနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့ ၊ Crocus City Hall မှာ ကျင်းပမှာပါ။
အခုလက်ရှိမှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်စုစုပေါင်း (၈၃)ယောက် ရှိနေပါပြီ။ Miss Universe website မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတတင်းအရကတော့ စုစုပေါင်း (၈၈)ယောက် ရှိမှာပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲရဲ့ Event Schedule ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
20-24 October: နိုင်ငံအသီးသီးကမယ်တွေ ရုရှားကို ဒီရက်အတွင်းမှာ လာကြရမှာပါ။
October 22: Birthday SEC "Vegas",ared carpet appearance inaduet with singer Eminem October 25: Welcome Event
October 26: Opening of Mercedes Fashion Week with Olivia
October 27: Fashion Day in the Crocus City Mall
October 28: Mercedes-Benz Moscow Raceway & SPA-day in Agalarov Ectate
November 3: National show of costumes, TRC "Vegas" ( ustream live ကနေ ကြည့်လို့ရပါတယ်။)
November 5: 20:00 Preliminary Competition, Crocus City Hall (GMT+4 စင်္ကပူထက် လေးနာရီ နောက်ကျပါတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ဆိုရင်တော့ နှစ်နာရီခွဲပဲ ကွာပါတယ်။) ( ustream live ကနေ ကြည့်လို့ရပါတယ်။)
November 6: Press conference by Donald Trump (owner of the Miss Universe businessman) November 7: Charity auction
November 9: 22:00pm (SG 6pm) - Final Night of MU2013 at Crocus City Hall (Xbox Liveကနေ ကြည့်လို့ရပါတယ်။)
November 9: Contestants Departure
ဒီပွဲအတွက် အကြိုက်ဆုံး အလှမယ်ကို ပြောပါဆိုရင် Miss France, Hinarani de Longeaux ကို ရွေးပါမယ်။ Hinarani ဟာ အရမ်းကိုကြည့်ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ တခြားမယ်တွေနဲ့လည်း သိပ်မတူဘဲ တမူ ထူးခြားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုံးကလည်း လှတယ်ဆိုတာအပြင် ကျစ်လစ်မှုပါ ရှိပါတယ်။
Hinarani ဟာ တကယ်တော့ Miss France 1st runner-up ပါ။ Miss France ပြိုင်ပွဲမှာ လူတွေက သူမကို တခဲနက် အားပေးခဲ့ကြပေမဲ့ 1RU နဲ့ ပြီးခဲ့ရသူပါ။ ဒါပေမဲ့... ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ရမဲ့အချိန် အဆင်မပြေတာကြောင့် ပထမရတဲ့ Marine Lorphelin က Miss World 2013 မှာ ဝင်ပြိုင်တာမို့ France orgက Hinaraniကို Miss Universe 2013 ကို ပေးသွားလိုက်တာပါ။ Marine Lorphelin ကတော့ Miss World 2013 ပြိုင်ပွဲ မှာ first RU, Queen of Europe ဆုတွေ ရသွားပါတယ်။ ကျမကတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးကို သဘောကျပါတယ်။
ပြင်သစ်ဟာ မယ်စကြာဝဠာဘွဲ့ကို (၁၉၅၃)ခုနှစ်မှာပဲ တစ်ခါရဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆယ်စုနှစ်အတွင်း မယ်စကြာဝဠာပွဲမှာ အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ ပြင်သစ်ပါပါတယ်။ ခု.. လက်ရှိ လေးငါးနှစ်အတွင်းမှာတော့ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၁နဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွေမှာ top-10 အထိ ပြင်သစ်မယ်တွေ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၁၀)မှာတော့ ပြင်သစ်က top-15 ပဲ ပါပါတယ်။
ခုလက်ရှိအချိန်မှာ Hinarani ဟာ MU2013ပွဲအတွက် front runnerပါ။ ကျမကတော့ သူ့ကို ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Miss Universe 2013 ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ top-5 တော့ အသာလေးဝင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မနှစ်က Miss South Africa, Melida Bam လို နာမည်တအားကြီးပြီး top-10 လောက်နဲ့ ပြီးသွားမှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်။
Hinarani ပြီးရင်တော့ Miss Indonesia, Whulandary Herma ကိုကြိုက်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားဟာ တကယ်တော့ အလှမယ်လောကမှာ အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ နိုင်ငံက အလှမယ်တွေကလည်း အင်ဒိုတရုတ်မလေးတွေပါ။ မူရင်းအင်ဒိုလူမျိုးတွေကတော့ ဘာသာရေးကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့် ဝင်မပြိုင်ကြပါဘူး။ MU ဒိုင်တွေက Miss China တွေကိုသာ သဘောတကျနဲ့ ရွေးချင်ရွေးပေမဲ့ အင်ဒိုတရုတ်မလေးတွေကိုကျတော့ မရွေးတတ်ကြပါဘူး။ (၂၀၁၂)မှာတော့ အင်ဒိုနီးရှားကမယ်က တစ်မျိုးထုးခြားသွားပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေကမယ်တွေနဲ့ လုံးဝ (လုံးဝ) မတူတဲ့ Whulandaryကို မယ်စကြာဝဠာပွဲအတွက် ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
ထူးခြားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာအပြင် လှပတဲ့၊ ပေါင်တံ ရှည်ရှည်သွယ်သွယ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Whulandary ကိုတော့ MU2013 မရရင်တောင် ဒီပွဲမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရစေချင်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း သူ.. အနည်းဆုံးတော့ top-15 ရမယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ တစ်ခုပါပဲ။ သူက မော်ဒယ်ဆိုတော့ "Kodomo Walk" နည်းနဲ့ လမ်းလျှောက်တာကတစ်ခုက MU ပွဲနဲ့ မသင့်တော်ဘူး ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဟာကို ပြင်လိုက်ရင် ကောင်းမယ်။
ဒါနဲ့စကားမစပ်.. အစပိုင်းကတော့ ( အာရှအလှမယ်တွေ Miss World နဲ့ Miss Supranational ဆုတွေ မရခင်အထိ) ဒီနှစ် MU2013 ကို အာရှကမယ်ကို ရစေချင်ပါတယ်။ ခုတော့ စိတ်ကူးပြောင်းသွားပါပြီ။ :P
သူတို့နှစ်ယောက်အပြင် နောက်ထပ်သဘောကျမိတဲ့ အလှမယ်ကတော့ မက်ဆီကို အလှမယ် Cynthia Duque ပါ။ မနှစ်က မက်ဆီကိုအလှမယ်က အရမ်း လူကြိုက်များပေမဲ့ ကျမကတော့ လူကောင်ထွားလို့ မကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။ (၂၀၁၃)မယ် စင်သီယာကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ သူက ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိတယ်။ ကိုယ်လုံးလည်း လှတယ်။ တစ်ခါမြင်ပြီးရင် နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ချင်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ကျမကတော့ သူ့ပုံတစ်ပုံတွေ့ပြီးတာနဲ့ သူရဲ့ တခြားဓါတ်ပုံတွေ လိုက်ရှာ၊ movie clip တွေလိုက်ကြည့်တော့တာပါပဲ။ Mexico ဟာ (၁၉၉၁)မှာတစ်ကြိမ်၊ (၂၀၁၀)မှာတစ်ကြိမ် မယ်စကြာဝဠာဆု ရဖူးပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာလည်း top-10 တော့ အသာလေးဝင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဝင်လည်းဝင်စေချင်ပါတယ်။း)
(03/10/2013; 6:38PM; GMT+8)
Posted by witch83 at 6:41 PM2comments: